जसपा कार्यकारिणी समितिबाट संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. भट्टराई - Jyotinews
जसपा कार्यकारिणी समितिबाट संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. भट्टराई
ज्योतिन्यूज २०७७ कार्तिक ५ गते ६:३५
७ सय ७९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा
काठमाडौं ५ कात्तिक ।
जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएका छन् ।मंगलबार सम्पन्न जसपा कार्यकारिणी समितिको दुई दिने बैठकले वरिष्ठ नेता भट्टराईलाई परिषद्को अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।जसपाको परिषद्प्रति केन्द्रीय समिति उत्तरदायी हुनुपर्ने गरी विधान पनि पारित भएको छ ।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष सुमनले दिएको जानकारी अनुसार परिषद् अध्यक्षसहित बैठकले केन्द्रीय विधान एवं नियमावली संशोधन गर्दै केन्द्रीय समितिसमेत घोषणा गरेको छ । यसअघि ७ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने विधानमा व्यवस्था भए पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै ७ सय ७९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकले संघीय सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सुमनले बताए । अन्य आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई, वरिष्ठ नेताद्वय राजेन्द्र महतो र अशोक राईलाई दिइएको छ ।